Kusvira Melissa MuWarehouse kubasa – Beche kutsvuka kunge FANTA! – Makuhwa.co.zw
Kusvira Melissa MuWarehouse kubasa – Beche kutsvuka kunge FANTA!
Kusvira Melissa MuWarehouse kubasa – Beche kutsvuka kunge FANTA.Hapana ainyatsoziva kuti ndaiita nezvei kusara kwemaboss angu. Ndaingoroka roka mushop ndakarova sutu yangu aiwa mucheno waive mugariro.Twumababie twemushop twainditi mukoma Gerald. One day Melissa akandipinza pamiyedzo gaya!
Melissa aiva receptionist aiva nemagaro ari average, kakutsvuku ane kasweet voice. Munhu wese aitomugaira horror. Kubva kumanagment kusvika kunanamusharukwa. But ndini ndakazokapedzera shungu, inzwa….
Shop yakanga yavharwa madoor, but macustomers akanga achirimo. Mellisa akapinda muwarehouse ndiri by 1 hangu,”mukoma Gerald mamboonawo Chief here” ndakati chief vaenda kuden wani, “mungaitewo Pen here” ndakamuudza was busy with it, kakabva kandibvutira pen yangu kobva kada kumhanyira mushop, ndakati hekani waro. Ndakakati dzvii ruoko meso edu ndokubva asangana ruoko rake rwainge rwakapfava sedonje, mazino ake akati mbee kuchena. Maziso ake achiratidza kuzadzwa nerudo…”Iwe Gerald ndisiye uko dakuenda kubasa” kkk ndakangoti nechemumoyo wadenha mangwiro. Ndakatanga kutamba naye chikudo kusvika mboro yangu yamira nehasha, ndakatoziva kuti ndowaitova wega mukana.. world cup pajoza!
Ndakakadhonzera mumashelves, ndakati wasvirwa iwe. Ko ndaityei tirisu security yacho. Ndakafugura kamini skirt pandakadzikisa kapulling sox wanei mukati muzere huchi, fanta, murungu chaiye pandakati ndipfekedzere wanei yanzi dzvii, ini chava chii zvee. Yakabva yanzi mukanwa ndoo apo bhurugwa rangu raive mumabvi. Kakazongoti tendeu ndokubva kandipira mhata matako aipenya zvawo iyayo handina kutora nguva ndakaibairira poo ndiye koi koi koi…kachingoshinyira. Ndakaita hwejongwe 2mins takanga tatopedza basa.
Kakazongoti kwanyanu kabva kati tsek, ndobva kapfeka ndiye Ko Ko Ko kachipinda mushop kachigadzirisa bvudzi. Ndichisunga zvangu bhande rangu ndichingoti wamama.
Ndakazoti ndapinda kumatill operator uchazonzwa hako dai pasina nyaya dzesviro nanhasi ndingadai ndichiripo pajoina city ipapo.
Related Topics:Kusvira Melissa MuWarehouse
Chii chandingaita kuti nditundise mukadzi wangu pabonde?
Ndakasvira mukadzi wemunhu Nyoro muPark!
Kusvira Melissa MuWarehouse paJoina City – Beche kutsvuka kunge FANTA